Nezvedu - Micvd.com
Shanghai Npack Machinery Co., Ltd. inyanzvi inogadzira mhando dzakasiyana dzemvura & pasita kurongedza michina. Hedu makuru zvigadzirwa: NPF akateedzana ekuzadza michina, pisitoni yekuzadza michina, yekufashukira yekuzadza michina, giravhiti yekuzadza michina, uremu yekuzadza michina NPC nhevedzano ye rotary capping michina, inline capping michina; NP akateedzana eupfu, emvura, granular otomatiki ekuputira michina; nemuchina wekuwachisa, ovhoni, vasina kuvhura, aruminiyamu mapepa ekuisa chisimbiso, anodhinda inkjet, michina yekunyorera, matafura e rotary, mabhandi ekutakura uye zvimwe zvigadzirwa zvekubatsira. Michina yedu anoshandiswa nevakawanda nezuva - makemikari, zvizoro, mishonga yezvipembenene, mafuta, chikafu, chinwiwa, mishonga uye mamwe maindasitiri.
Isu tinogara tichiomerera pane nheyo dze "hunyanzvi hwekugadzira" uye "mhando yepamusoro." Isu tinotarisa pane chigadzirwa R&D apo tichiona hutungamiri hwetekinoroji uye hunyowani maficha. Zvese zvigadzirwa zvakagadzirwa nezvinhu uye zvinhu zvakatengwa kubva kuGermany, United States, Japan, uye South Korea, kuitira kugadzirisa uye kuunganidza kweinjiniya vedu nevashandi. Ndivo kuchema kwehungwaru hwedu uye nekushanda. Isu tinoshandisa ISO9001: 2008 zvemhando yekutarisira system uye 5S pane-saiti manejimendi maitiro ekuona kuti inomanikidza zvigadzirwa zvemhando uye chaiyo uye yakakodzera nguva. Yedu nyanzvi mushure mekutengesa basa timu yakagadzirira kupa nekukurumidza uye nekubatsira rubatsiro kune vatengi chero nguva.
Mushure memakore ekufambisa, takawana ruzivo rwakapfuma mumagetsi. Pasinei nhengo kana kamuti, yakakwirira-mambakwedza kana zvinhu zvinoparadza, tichakupa mhinduro yakanakisisa panguva yekutanga. Basa rakanaka uye ruremekedzo rwakanaka runotiita kuti tive vatungamiri vatungamiri mune iyi indasitiri. Mishonga yakatumirwa kunopfuura nyika dze50 nenharaunda, kusanganisira America, Europe, Middle East, uye Southeast Asia, kugamuchirwa zvakanaka nevatengi vedu.
Nekuda kwechikwereti chedu uye basa, takaita budiriro huru mumakore apfuura. Isu tasimbisa kwenguva refu bhizinesi hukama nevatengi vatengi. Zvigadzirwa edu aivigirwa kunyika dzakawanda & nzvimbo, dzakadai Korea, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, Vietnam, Iran, Japan, Denmark, Romania, Bulgaria, Russia, South Africa, Nigeria, USA, Australia, Canada, Argentina uye Chire. Kunze kwemuchina nemidziyo, isu zvakare tinopa yekugadzira mitsara. Tinotarisira kwenguva refu uye kubudirira kubatana nevatengi pasi rese.
Isu tinokuzivisa iwe nemhando yepamusoro uye inobudirira mushure mekutengesa-sevhisi. NPACK KUSVIRA KWAKO ZVESE ZVAKANAKA.